QABSOO FINIINSUU + QEERROO/ABO 2005 = H.RES.128 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQABSOO FINIINSUU + QEERROO/ABO 2005 = H.RES.128
QABSOO FINIINSUU + QEERROO/ABO 2005 = H.RES.128
SEENAA Y.G (2005), kutaa 4ffaa fi xumuraa – Ebla 13, 2018
Qabsoon Oromoo wareegama Ulfaataa booda boqonnaa 2ffaa irra ga’eera. Boqonnaa 1ffaan, Ummata Biyya keessaa ijaaranii fi hiriirsanii diina dura murannoo fi Gootummaan akka dhaabbatu taasisuudhaa. Inni 2ffaa humnoota alaa Qabsoo haqaa Ummata Oromoo fudhachiisuudhaa. Kana booda nurra diinatu ofii jedhee malachuu qaba jechuudhaa. Adeemsi kun wareegamaa fi seenaa hedduu keessa tarkaanfatee asi ga’ee jira. Seenaan kun jaallannus jibbinuus hojjatameera. Maqaa bareechinus, xureessinuus takkaa galmaa’eera. Qabsoo seena Qabeessa ta’ee kana, Ijoollee irraa abbaa adda baasuuf yaallus, Ijoollee abbaa dhabsiisuuf yaalluus, abbaa itti ta’uuf munaagnuus, seenaan kun Gootoota Oromootiin hojjatameera. Har’aa adeemsa kana isinin ga’uun barbaade.
Qabsoon Qeerroo SEENAA Umama keenyaan wal qabata. Gadaadhaan wal keessa jira. ABOn Sochii Qeerroo Marsaa 3ffaaf akka furmaataatti eegalsiisuu ka barbaadeef, qoricha wayyaanee/diinaaf qotuu irraati.wayyaaneen Qabsoo Oromoo bara baraaf dhaamsuuf, qabxiilee armaan gadii akka furmaataatti keewwattee turtee.
ABO fi Qabsoo Oromoo Biyyaa baasuu fi warra Biyya keessatti hafee ajjeesuu fi fixuu,
ABO fi Qaboo Oromoo Biiyyoota Ollaa keessaa dhabamsiisuu fi qabsicha duubbee dhabsiisu,
Hidhaa fi ajjeechaa heddummeessanii Ummata jiilchuu
Waraanaan Ummata Oromoo cabsuu
Ummata Oromoo Dingdeen cabsanii OPDO jalatti bara baraaf akka jilbeenfatu taasisuu
Yoo Ummati amma dhumaatti falmatee, mirga bubuutuu gadhiisaa barootaaf miila isaan jala tursuu
Oromoo ka ta’ee fi Ilaalcha abbaa Biyyummaa qabu itti fufiinsaan hidhu, ajjeesuu fi Biyyaa baasuu
Waggoota dheeraaf Siyaasi kaayyoo wayyaanee kana fashalsuu danda’uu irratti hojjatameera. Ummata ofii akka har’aa kana harka osoo wal hin qabatiin wayyaanee irratti qawwee kaasuu jechuun , waraana wayyaane keessa harki 70 Ilmaan Oromoo waan ta’aniif , isaanumaan hiriirsanii Ummata akka ajjeesaniif hayyamuu waan ta’eef, falli furmaata waaraa qabu itti yaadamee, tokko jedhanii karaa Diinni gonkumaa yaaduu hin dandeenye irratti hojjatamee. Innis dursa Ummata kana aadaa isaa kan Gootummaa durii Ummata keessa akka gadi dhaabbatu taasisuudhaa. wayyaanee jilbeenfachiisuuf yeroo fudhatanii hojjatanii , dhaloota itti guddisuudhaa jedhanii murteeffatan. Ijaarsa aadaa Ummatichi qabutti dhimma ba’uun Qeerroon akka ijaaramuu fi Dirqama fudhatu yeroo dheeraaf hojjatamee. Gadi fageenyaan Seenaa kana hin ibsuu. Yeroo qaba waan ta’eef.
Bara 2005 dhimmi kun ka’ee bifaa fi sochiin isaa hundi irratti hojjatamee. Sammuun diinaaf qoricha qotuu danda’uu walitti dhufee Qeerroo ijaaruu eegalee. Sochii kanatti osoo jiranu, wayyaanee qabxiilee dabalata Qabsoo Oromoo ABOn hogganamuu awwaaluuf sadarkaa addunyaattuu duula eegalte. Bifa kanaan wayyaaneen Qabxiilee armaan gadi qabattee baatee.
Filannoo gaggeeffaman hundaa hanga %99 tti mo’ee jettee
Paarlaamaa keessattis hanga %98 anatu mo’ee jettee
Guutummaa Biyyattitti Ummatoonni na waliin jiruu jettee
Kaayyoon ABO kaayyoo namoota muraasaa malee, ka Ummata OROMO miti jettee
ABOn Biyyattitti shororkeessaa waan ta’eef galmee shororkeessaa addunyaa seenu qaba jette
Ol aantummaan saba tokko hin jiru hunduu wal qixaa jettee
Ani namoota siyaasaa hidhee tikkoollee hin qabuu jettee
Sirni kiyyaa Dimokiraatawaadhaa,,,Ummatoonni jaallatanii misooma keessatti hirmaatu jettee
Raayyaan waraanaa kan Ummatootaa ykn Biyyaa malee ka paartii tokko miti jettee
Dingdeen Biyyaa dhibbeentaa 11n guddatee jettee
Yoo nuuti hin jirru ta’ee yk Angoo kana gadhiifnee Biyyi ni diigamtii jettee , Addunyaa maratti lallabdee.
Wal ga’iilee Gamtaa awuroppaa fi Ameerikaa , akkasumas Afriikaa irratti lallabdee. egaa nama qalbii qabuuf waan kana dura dhaabbachuuf toftaa filachuun dirqama. Waan wayyaaneen addunyaa itti amansiifattee kana harkaa gatuuf siyaasaa fi adeemsa jabaa lafa keewwachuu murteessaa ture. Kanarra ibsuun barbaachisaa miti, qorichi kana Qeerroo ijaaranii Ummata ijaaruudhaa jedhamee hojiin qormaata heedduu seenaaf dhiisee dabruu keessa dabramee irratti hojjatamee. Shira kana cabsuuf Ummata ittiin daldalamuu kaasuun dhugaa baasiisuun akka danda’amuu itti amanamee hojiin qabsiifamee. Bu’aa ba’ii turee seenaaf dhiifnee qabxiilee sochii ijaan mul’atan booda dhufani fi diibii shira wayyaaneef tokko tokkoon kennamee ilaalla.
Filannoon bara 2015 gaggeeffame. Wayyaaneen mo’adhee jettee. Paarlaamaas mo’adhee jettee. Kana saaxiluun qawween osoo hin taanee, Ummataan qofaadhaa. Filannoon dhumee baatii 7 booda sochiin qeerroo guutuu Oromiyaatti dhohee addunyaa rifaasisee. Wayyaanee wawwachisee. Garatti qaban dhibee wayyaaneen qullaa dhaabbattee. Dubbii haa gabaabsuu, Gaaffii Gamtaan Awuroppaarraa wayyaaneef dhihaatee, Ummatatu %99 n na filatee hin jennee ? Ummati kun akkamiin baatii 7tti sitti galagaluu dnada’ee ? moo gabaasakeetu sirri mitii ? jedhaniin. Wayyaaneen sochiin kun kan namoota muraasaatii ni tu’annaa jettee. Waan tu’attuus dhibee, dubbiin qeerroo irraa Ummatattu ce’ee itti fufe. Wayyaaneen yakka hedduu hojjattee. Caalaattuu dubiin itti jabaattee. Addunyaan iti galagaltee waa hundaa ilaaluu eegaltee
Wayyaaneen ABO fudhatama dhabsiisuuf, Kaayyoo namoota muraasaatii jechuu fi Shororkeessummaatti ramachiisuf shiroota hedduu hojjattee. Daldaltoota siyaasaa addunyaaf dolaara miliyoona 300 ol itti dhangalaaftee yaalaa turtee. Qeerroon garuu alaabaa ABO qabatee fi gaaffiin ABO gaaffii ummata Oromoo ta’uu addunyaatti mirkaneesse. Addunyaan ammas itti deebitee wayyaanee gaafattee. Wayyaaneen garuu matumaa jettee. Addunyaan hogganoota dhaabbilee mormitootaa waamuun sochiin qeerroo maalii jedhanii waa hundaa mirkaneeffatan. Dhugaa ba’uu hogganoota kanaaf hidhaatu Biyyatti isaan eeggate. ABOn onnee Oromoo hundaa keessa jiraachuu ibsamee.
Raayyaan waraanaa wayyaanee ka Biyyaatii jettee ittiin daldaltuu Qeerroo fi Ummata ajjeesuun tokkoffaa ta’ee asi ba’ee. Somaaliyaa keessatti hojii fafaa irratti bobba’ee. Gabaasi kanaa hundii humnoota alaa ga’eera. Waraanni jiru wayyaanee tikisuuf ka dhaabbatee ta’uu guutummaatti bira ga’an. Wayyaaneen amma waan waraanaa humnoota alaa biratti hin kaaftuu.
Wayyaaneen Ilmaan Oromoo , Oromummaa qofaan yakkitee mana hidhaatti guurtee waakkattee, Namoonni siyaasaa mana hidhaa jiran tokkolle hin jiru jettee dhaadattee. Humnoonni alaa garuu karaa hin beekamneen kumoota kudhaniin hiitee jirtaa jedhaniin. Ammallee amanuu hin dandeenye.dhumarratti dirqiin isaan qabnaan , kumoota 20 hiikuu eegalan . kanaanis saaxilaman.
Gaaffii Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa miti jettee wayyaaneen isa falmaa turtee addunyaan diddee, inumaa Oromoon sirnaa Gadaa akka sabaatti ittiin bulaa tureqabaa jedhanii, karaa UNSCO galmeessan. Kana jechuun Oromoon boruu Abbaa Biyyaa ta’uu gaafatee Hiree murteeffachuuf Mirga guutuu qabaa jechuudhaa.
Dubbii haa gabaabsuu, Hogganoonni maqaa hedduu itti baafnuu, hojjaa fi beekumsa keenyaan madaalluu wayyaanee akkasittin qoricha itti qotanii , HR 128 irraan ga’an. Waan nama dhibuu mootummaan Ameerikaa haqa kana hundaa hordofee dhugeessuudhaan murtee har’aarra ga’ee. Ka caalaatti nama dhibuu wayyaaneen adeemsa ameerikaa kana hubachuun jijjiiramaa kabeebsaa gaggeessuutti osoo jirtuu itti dammaqanii si ga’aa jedhanii irratti muran. Seenaa QEERROO ABO lafumaa kaanee yennaa xibaarruu hedduu nama gaddisiisaa. Wixineen waggaa 15 kanadha. Hanga 2020—-bilisummaatti itti fufa. Sochiin Qindaa’aa, Qeerroo keessatti argitan kanarratti waan ijaarameefii. Ka’umsaa fi galii waan qabuufii. Kanaaf hanga bilisummaatti akka fufu irra ejjatanii,,,ofitti amananii dubbatan. Kanatu jala jiraaf Obsa horatanii tarkaanfatan. Kaayyoo kanatu galii ga’uu qabaaf osoo gubannuu obsinee ,,obsanii. Ka’umsaa fi galii qabaaf, Gumaaf hin jarjarree. Kaayyoo Qabaaf wareegamaa keenya awwaallee callifnee. Gumaa ajjeechaatti dacha 10 naanna’uu of harkaa qabnaaf Imalaa jirra. Sochiin Qeerroo ABO Ummata Ijaaruu xumurameera. Boqonnaa 2ffaa Biyyoota alaa amansiisuu HR 128n mirkanaa’eera. Boqonnaa 3ffaa DIINATU HARKASAAN OFITTI WAAMMATA .
Dubbiin heddummaateef ……HORAA BULAA !!!!!!!
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! – kutaa 3ffaa
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! – Kutaa 2ffaa
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! – kutaa 1ffaa
RSWO: Qabsoo Karaa Nagaafi Aarsaa Qeerroo [Dambalii Keessummaa] [RSWO : Bitootessa 4, 2018] - ODUU;…
Hawwii Tazarraa: Wallee Qabsoo Harawa - "Qeerroo"
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 13, 2018